dhiri: samsung & apos; s giya inokodzera 2 pro kusimba bhendi yatove 15% kubviswa paamazon
Kuru Nhau & Ongororo Bata: Samsung & apos; s Gear Fit 2 Pro bhendi yekusimba yatove 15% yabviswa paAmazon
Bata: Samsung & apos; s Gear Fit 2 Pro bhendi yekusimba yatove 15% yabviswa paAmazon
Iyo Gear Fit 2 Pro Fitness band yakaziviswa zviri pamutemo mukutanga kwaGunyana muna IFA 2017 bhizimusi rekuratidzira uye ndokutanga kuita musika munguva pfupi yapfuura. Chaizvoizvo, chinosakara chishandiso hasn & apos; yanga ichitengeswa kweinopfuura mwedzi kana zvakadaro, asi vamwe vatengesi vatotanga kudzikisa mutengo wayo.
Samsung yakazivisa iyo Gear Fit 2 Pro ichave iripo yekutenga kwe $ 200. Nekudaro, Amazon ikozvino inopa bhendi yekusimba ye $ 170 chete, chaiyo 15% yakachipa pane iyo MSRP. Chishandiso chinosakara chinowanikwa muDiamondi Tsvuku uye Liquid Dema mavara, pamwe nehukuru uye hukuru hukuru.
Iyo & apos; ndiyo yekutanga nguva iyo Gear Fit 2 Pro inowana mutengo wakatemwa, asi sezvo isu & apos; tichiswedera padyo neBlack Chishanu, unogona kuyedzwa kubatisisa pakutenga kwako uye kumirira chibvumirano chiri nani paSamsung & apos; s new fitness band.
Kana iwe usingakwanise & kumirira kusvika kupera kwemwedzi unotevera, ipapo ungangoda kukurumidza sezvo izvi zvingangove iri shoma nguva kupihwa uye Amazon haina & apos; t tsanangura kuti chibvumirano chinofanirwa kupera.
node js hello muenzaniso wepasi
iPhone 8 vs iPhone 7 / 7Plus, Galaxy S8 / S8 +, LG G6, Google Pixel: saizi kuenzanisa